फिचर Archives - Nayabulanda.com
इलाम : मोरङ मधुमल्ला घर भएका ६० वर्षिय पुष्पबहादुर बोहोराको जिवन विगत ५० वर्ष देखी हातका खराउसँगै वितेको छ । १० वर्षको कलिलो उमेरमा पोलियो रोगका कारण खुट्टाको भर नभएपछि हातमा काठका खराउ लगाएर चारपाउको भरमा नै जिन्दगी चल्दै आएको छ । खुट्टाको खासै भर नभएपछि हातमा काठका खराउ बनाएर लगाएको उनी वताउँछन् । श्रीमती र दुई छोर...
काठमाडौं : काठमाडौ उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न शहरमा आज गाईजात्रा पर्व मनाइँदै छ । गाईजात्रा विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने पर्व हो । यस पर्वमा वर्र्षभरि दिवंगत भएका आफन्तको नाममा गाईको अनुहार र गणेशको चित्र अंकित गाई बनाएर शहर परिक्रमा गर्ने चलन छ । यसो गर्दा मृतात्माले यमलोक जाँदा बाटोमा पर्ने बैतरणी नदी सजिलै ...
चुलाचुली : इलामको दक्षिणी भेगमा रहेको चुलाचुली गाउँपालीकामा यो बर्ष पनि हात्तिको उपद्रो बढ्दो छ । झापा दमकको हंसेदुम्से सामुदायीक वन संग सिमाना जोडीएको चुलाचुली गउँपालीकाका बस्तिमा उक्त जंगलमा आएको जंगली हात्ती पसेर क्षती पुर्याउने गरेको स्थानियले बताएका छन् । छिमेकी जिल्ला झापाको दक्षीणी भारतीय सिमाना पारि...
राजदुवाली स्थित माइखोलामा माछा समाउँदै स्थानीय (फोटो फिचर )
इलाम राजदुवाली स्थित माइखोला हाइड्रोपावरको पानी बन्द गरेको समयमा स्थानीयहरु माछा समाउँदै । यहाँको माछा पुल नजिकैको होटलमा बिक्री गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन्। तस्वीर: युद्धबहादुर बोहोरा ...
काठमाडौं : कोठामा हामी चार जना साथीहरु बस्छौं । चारै जना सामाजिक सञ्जालमा यति सक्रिय छौं कि हामी जहिल्यै सुत्दा रातको १ वा २ बज्छ । चारै जना फेसवुक , भाइवर , वाड्स एप र ट्वीटरमा सक्रिय छौं । नढाटी यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा यसले हाम्रो पढाई र हाम्रा अन्य कृयाकलापमा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष धेरै नै असर पारेको छ । एउटा मलाई प...
धनकुटाका डाँडैपिच्छे भ्यू टावर
धनकुटा : धनकुटाका विभिन्न डाँडामा भ्यू टावर बनाउने क्रम बढेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता टावर निर्माणको क्रम बढेको हो । कुनै स्थानमा टावर निर्माण भइसकेका छन् भने कुनैमा काम जारी छ । भ्यू टावर निर्माण भएसँगै पर्यटकको आवागमन समेत वृद्धि भइरहेको छ । करिब एक बर्षअघि सुनसानजस्तै रहेको सागुरीगढी गाउँपाल...
कहाँ लुके निर्मलाका हत्यारा ? ‘भीआइपी’ माथि स्थानीयको शंका
कञ्चनपुर : १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याबारे नयाँ टि्वस्ट सतहमा आएको छ । घटना भएको २४ दिनसम्म कानमा तेल हालेर बसेको प्रहरीले भदौ ४ गते एकजना मानसिक रोगीलाई हत्याराका रुपमा सार्वजनिक गरेपछि स्थानीयवासीले किन पत्याएनन् ? के स्थानीयवासीले बलात्कारी र हत्यारा को हो भन्ने सुइँको पाएका छन् ? यसबारे...
इलामको फाकफोकथुममा आगलागी , १५ लाख बराबरको क्षति
सुजता सुनुवार इलाम : इलामको फाकफोकथुममा आगलागी हुँदा १५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । जिल्लाको फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नम्बर १ आमचोकका भीम बराइलीको घरमा बुधबार अचानक आगलागी हुँदा सो बराबरको नोक्सान भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । एउटा घरमा आंशिक क्षति पुगे पनि अर्को घर पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको छ । घरमा रहेका ...
धनकुटाका स्थानीय तह करका विषयमा आलोचित, स्थानीयको चर्को विरोध
धनकुटा : धनकुटाका पुराना केही नगरपालिकबाहेक अन्य स्थानीय तह करको विषयमा आलोचित बनेका छन् । संघीयत प्रणालीअनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे पनि करको विषयमा भने नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । यतिबेला देशभरीका अधिकांश स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी विवाद उठिरहेको छ । त्यस विवादबाट धनकुटा जिल्ला पनि अछुतो रहेन । धनकुटा...
सार्वजनिक बिदामा पनि इलामका सरकारी कार्यालय खुल्लै
नयाँ बुलन्द इलाम : प्रदेश १ को सरकारले गरेको निर्णयलाई सोही प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नै अवज्ञा गरेका छन् ।बकर–इद (इदुल जोहा) पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपनि यहाँका सम्पूर्ण विषयगत कार्यालयहरु खुल्ला नै रहेका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै इलाम जिल्...